မှန်ဘီလူးဖြစ်ရပ်မှန်ကိုဆက်သွယ်ပါ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-bestbusinessprinting.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan မှန်ဘီလူးဖြစ်ရပ်မှန်ကိုဆက်သွယ်ပါ ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
စက္ကူ:20 PT(0.508 မီလီမီတာ)ကိုရွှေသတ္တုပါးကတ်ထူပြား
Finish:လက်ျာဘက်၌ PP အပေါ်ယံပိုင်း(ခြောမှတျတောကျပသော) /အကာအကွယ်ရေနံ/ကပ်ညှပ်ဖြတ်တောက်သေဆုံး/ဖောင်းကြွ/ဖွဲ့စည်း
မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်ကော်ဖီသောက်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူကိုရွှေသတ္တုပါးများအသုံးပြုမှု,ခြုံငုံအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပယ် ထား. မြတ်သော,ကြော့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်အတူရိုးရှင်းတဲ့စတိုင်,တစ်ဦးဂန္ဖက်ရှင်အမြင်အတွေ့အကြုံဖေါ်ပြခြင်း.
အဆိုပါခုံးသုံးဖြစ်ပါတယ်-ပူပြင်းသည့်ဖောင်းကြွပန်းကန်မှတဆင့်နှိပ်ထို့နောက်စက္ကူပေါ်မှာဖိအားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ရှုထောင်အကျိုးသက်ရောက်မှု.အဆိုပါပန်းကန်နှစ်ခုသွပ်ပန်းကန်မျိုးနှင့်ကြေးနီပြားရှိပါတယ်.အဆိုပါသွပ်ပန်းကန်တစ်ဖောင်းကြွတံဆိပ်ခတ် mode ကိုဖြစ်ပါတယ်,နှင့်ကြေးနီပြားအကျိုးသက်ရောက်မှုအလွှာစေမည်,နှင့်ပြဌာန်းခွင့်နည်းလမ်းကိုတင်ပြပါလိမ့်မည်.အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဖြစ်ပါသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 http://www.bestbusinessprinting.com/my/contact-lens-case.html
မှန်ဘီလူးဖြစ်ရပ်မှန်ကိုဆက်သွယ်ပါ ထုတ်လုပ်သူနှင့် မှန်ဘီလူးဖြစ်ရပ်မှန်ကိုဆက်သွယ်ပါ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 95,737 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ bestbusinessprinting.com